Ndị ọkachamara na Semalt - Ihe I Kwesịrị Ịmara Banyere Ebumnuche Intanet
Egwuregwu Intanet na-ezo aka na mpụ nke, onye mmebi iwu na-eme atụmatụ site na yantinye nke otu ma ọ bụ karia na parameters na ebumnuche nke ịdọrọ ihe onwunwe ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke mmasị site na adịgborojaihe nnọchiteanya nke ihe iseokwu nke bu ezi okwu ma si otú a, na-enye data na-ezighi ezi.
Site n'ịdabere na ịntanetị site n'aka ndị ahịa na ndị nwe ụlọ ahịadị ka onye na-achọ ịzụlite azụmahịa: ọrụ ndị a machibidoro iji otu ọwa ahụ na-ebili. N'ọtụtụ ọnọdụ, ịntanetị gbanwerearụ ọrụ aghụghọ na-esiri ike ịchọta ma chọpụta ya, ha bụ isi obodo na-ahụ maka okwu.
Jason Adler, ọkachamara si Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, akọwapụtawo ụfọdụ ihe dị egwu gbasara aghụghọ nke weebụ iji nyere gị aka ịdị njikere maka ọgụ ahụ.
Site na weebụ hacking ka malware nsogbu, na oké egwu nke mpụ internet mereenweta nchegbu na mmalite afọ 2000. N'ọnọdụ ụfọdụ, a ghọtara esemokwu ahụ dị ka ihe enyemaka nke okwu banyere okwu ahụ kama ịbụỊntanetị na-abawanye uru na-eme kwa ụbọchị. Ogologo ego nke ulo oru na email na mmelite buru ibu na onu ogugundị ọrụ weebụ ejirila ego na-arịwanye elu. Dịka ọmụmaatụ, nje nke mebiri na 1999 mere ka mbibi ruru $ 80.
Egwuregwu nzuzo bụ ọrụ ebe ndị na-eme ihe ọjọọ na-enye nnukwu egoohere ma ọ bụ atụmatụ ndị a na-achọ iji mee ka ahịa na-emepe ahịa na nzube nke ime nnukwu uru.
Ụgha njirimara na-eme mgbe onye na-awakpo ahụ nwetara data na-enweghị ihe ọmụma nkenwe ya ma jiri data maka uru onwe onye kpọmkwem, uru ego..
N'afọ 2001, akụkọ IFUD na-egosi ntanetị na egosiputa njedebe weebụ bụọnụ ọgụgụ kachasị njọ maka ọnụ ọgụgụ nyocha nke pasent 43 nke mkpesa. Na mgbakwunye na ụdị mpụ ndị ahụ e kwuru n'elu, ajọ aghụghọmkpesa na njedebe nke aghụghọ aghụghọ, kaadị akwụmụgwọ ego, na ịkwụ ụgwọ ahịa.
N'afọ 2003, akụkọ nke IFCC kwuru na pasent 50 nke ndị omekome weebụbụ ndị bi na Texas, California, Florida, New York na Illinois. Akụkọ ahụ gosikwara otú o si sie ike ịdebe ndị na-emejọ ahụnke mpụ ndị a.
Dịka otu ngalaba na United States si kwuo, nke ahụ na-emekọrịta aghụghọ na Intanetbụ ihe atụ ugbu a nke ọrụ iwu na-akwadoghị gburu site na weebụ:
Ụgha ahịa na nchebe nchebe bụ nke abụọ Los Angeles na-egosipụta.Na mbụ nke akụkọ banyere ịzụ ahịa, ndị omempụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ego site na-ere mbak onye ọnụ ahịa mụbara site na $ 8na $ 15 n'ime ihe dị ka minit 45.
N'ọnọdụ ọzọ, ihe karịrị otu narị ndị ọrụ agha nke U.S. bụ ndị na-ezu ohi.Ndị na-eme ihe ọjọọ nwetara nọmba nchedo mmadụ na aha ndị isi ndị agha ahụ si na intaneti ma mesịa, jiri ha mee iheihe nchọpụta iji tinye maka kaadị akwụmụgwọ.
N'afọ 1999, ndị FBI tinyere aka na nchọta a na - achọsi ike maka onye mmepụta nke avirus kọmputa nke dabere na email ahụ dị ka ọwa iji kesaa ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. N'ime ụbọchị ole na ole, pasent 19 nke USụlọ ọrụ na 1.5 nde ngwaọrụ bụ ndị metụtara nke email a.
Ndị omekome na-ebido mwakpo na usoro gọọmenti United States. N'ime di na nwunyeafọ, ndị agha ahụ nọ n'ọnọdụ nke ikuku kọmputa ndị Pentagon na ndị ọchịchị ndị ọzọ nwere Source .